ESI EHICHAPỤ FOTO NIILE OZUGBO VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Hichapụ foto niile ozugbo VKontakte
Mgbe ufodu, okwu edere okwu MS Word kwesiri igbakwunye ihe omuma iji mee ka o doo anya, echefu echefu. Nke a na-ejikarị eme ihe mgbe ị na-emepụta akwụkwọ weebụ, ma ị nwere ike ime otu ihe ahụ na faịlụ ederede.
Gbanwee ederede ederede
N'ụzọ dị iche iche, ọ dị mkpa ịkọtara na ị nwere ike ịmepụta ndabere na Okwu n'ọtụtụ ụzọ, na n'ọnọdụ ọ bụla, ọdịdị nke akwụkwọ ahụ ga-adị iche na ihu. Anyị ga-agwa gị ihe gbasara onye nke ọ bụla.
Ihe omumu: Otu esi eme ihe na MS Word
Nhọrọ 1: Gbanwee agba agba
Usoro a na-enye gị ohere ịme ka otu peeji nke dị na Okwu na agba ma maka nke a, ọ dịghị mkpa na ọ nwererịrị ederede. Ihe niile ị chọrọ nwere ike bipụta ma ọ bụ gbakwunyere mgbe e mesịrị.
Pịa taabụ "Kere" ("Ntọala Page" na Okwu 2010 na nsụgharị ndị gara aga; na Okwu 2003, ngwaọrụ ndị dị mkpa maka nke a bụ na taabụ "Hazie"), pịa bọtịnụ ahụ "Ụkwụ Page"emi odude ke otu kiet "Obere Akwụkwọ".
Rịba ama: Na nsụgharị ọhụrụ nke Microsoft Word 2016, nakwa dịka Office 365, kama idepụta taabụ, ị ga-ahọrọ "Onye mmebe" - ọ gbanwere aha ya.
Họrọ ụcha kwesịrị ekwesị maka ibe.
Rịba ama: Ọ bụrụ na agba chaa chaa adaghị gị, ịnwere ike ịhọrọ ntụrụndụ ọ bụla ọzọ site na ịhọrọ "Ụcha ndị ọzọ".
Ụdị agba a ga-agbanwe.
E wezụga na mbụ "agba" n'azụ, ị nwekwara ike iji ụzọ ndị ọzọ jupụtara dị ka ndabere akwụkwọ.
Pịa bọtịnụ ahụ "Ụkwụ Page" (taabụ "Kere"otu "Obere Akwụkwọ") na họrọ ihe "Ụzọ ndị ọzọ jupụta".
Igbanwe n'etiti taabụ, họrọ ụdị nke peeji nke jupụtara na ịchọrọ iji dị ka ndabere:
Onye gụrụ akwụkwọ;
Foto (ị nwere ike ịgbakwunye ihe oyiyi gị).
Azụlite nke ibe ahụ ga-agbanwe dị ka ụdị nke ịjọrọ.
Nhọrọ 2: gbanwee ndabere n'azụ ederede ahụ
Na mgbakwunye na ndabere nke jupụtara ebe dum nke ibe ma ọ bụ peeji nke, ị nwere ike ịgbanwe agba agba na Okwu naanị maka ederede. Maka nzube ndị a, ị nwere ike iji otu ngwaọrụ abụọ: "Ụdị nhọrọ ederede" ma ọ bụ "Mejupụta"nke nwere ike ịchọta na tab "Home" (na mbụ "Ntọala Page" ma ọ bụ "Hazie", dabere na mbipute nke usoro a).
N'okwu mbụ, ederede ga-ejupụta na agba ị họọrọ, ma ọdịiche dị n'agbata ahịrị ga-anọgide na-acha ọcha, na nzụlite ga-amalite ma bido n'otu ebe ahụ dị ka ederede. Na nke abụọ - otu ederede ma ọ bụ ihe ederede niile ga-ejupụta na ihe edere ederede siri ike nke ga-ekpuchi mpaghara nke ederede, ma njedebe / mmalite na njedebe / mmalite nke akara. Ijuputa n'ime uzo ozo ndia adighi etinye aka na akwukwo akwukwo.
Jiri òké gị họrọ otu mpempe akwụkwọ nke ị chọrọ ịgbanwe. Jiri igodo "CTRL + A" ịhọrọ ihe ederede niile.
Pịa bọtịnụ ahụ "Ụdị nhọrọ ederede"emi odude ke otu kiet "Font"ma họrọ ụcha kwesịrị ekwesị;
Pịa bọtịnụ ahụ "Mejupụta" (otu "Paragraf") ma họrọ ụcha ejiri agbaju.
Ị nwere ike ịhụ site na screenshots otú ụzọ ndị a nke gbanwere ọdịdị dị iche na nke ọ bụla.
Ihe omumu: Otu esi wepu ozo n'ime Okwu n'azu ederede
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ na ndabere nke gbanwere
Ugboro ugboro, ọrụ ahụ abụghị naanị iji gbanwee ihe odide ederede, kamakwa iji bipụta ya n'ikpeazụ. N'oge a, ị nwere ike izute nsogbu - agbadoghị ndabere. Ị nwere ike idozi nke a dị ka ndị a.
Mepee menu "Njikwa" ma gaa na ngalaba "Nhọrọ".
Na windo nke mepee, họrọ taabụ "Ihuenyo" ma lee igbe dị n'akụkụ "Bipute na-acha na-emepụta ihe na usoro"emi odude ke ikpehe item "Bipute Nhọrọ".
Pịa "OK" imechi windo "Ngalaba", mgbe ahụ i nwere ike ibipụta akwụkwọ ederede yana ndabere.
Iji kpochapụ nsogbu na nsogbu ndị nwere ike ịchọta na mbipụta, anyị na-akwado ka ị gụọ isiokwu na-esonụ.
Gụkwuo: Mpịpụta akwụkwọ na mmemme Microsoft Word
Nke a niile, ugbu a, ị maara otú e si eme ihe ndabere na akwụkwọ Okwu ahụ, ma marakwa ihe "Ngwa" na "Ihe Na-eme Ka Ochie" dị. Mgbe ị gụsịrị isiokwu a, ị nwere ike ịmepụta akwụkwọ ndị ị na-arụ ọrụ karịrị, mara mma na echefu echefu.